PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2016-12-18 - VULA, VALA
Isolezwe ngeSonto - 2016-12-18 - EZEMIDLALO -
U-EPHRAIM “Shakes” Mashaba usendleleni. Ibhantshi lingagcwala umoya noma nini ekuqeqesheni iBafana Bafana. Ngicikica le ngosi nje uhamba indiki lokuqondiswa ubugwegwe ngenxa yobuhlathi abenza ebhampela izikhulu zeSafa, kubuka izwe lonke.
Yinto yakhe uMashaba ukulwa espanini uma izinto zingamvayeli kahle. Angisoze ngimkhohlwe ngo-2005 mhla ethi: “Ngiyamnyanya uRaymond Huck (Hack), ngiyayinyanya iSafa, ngibanyanya bonke.”
Amanye amathofi kaMashaba yizintatheli. Uma ibhemile, uvele abhodlele kuzona. Kakade yigugu elisha laseNingizimu Afrika ukucosha amaphuzu ngezintatheli. Abantu abangaziwa nasebephuphile babiza izintatheli, bathi azitshele izwe ukuthi bangamanxusa omkhankaso wocansi oluphephile. Kuse uma sebekhulelisile noma sebekhulelwe, akusafanele abezindaba babike ukuthi “umshumayeli wocansi oluvikelekile usenongiyosho ekhaya”.
Noma iSafa ingafuni ukwazisa isizwe ngokwenzeka eqenjini lesizwe ngodaba lukaMashaba, kuyacaca ukuthi imbhemele. Kokuncane okuzwakalayo ngecala wukuthi kunomdonsiswano ngemali okufanele ayithole.
Abazazi kangcono bathi iSafa isiqalile ukufuna umqeqeshi omusha weqembu lesizwe. Phakathi kwamagama abalwayo kwabagaqele ispani, kukhona elikaRoger de Sa (noma ekhonjwa eMphithi, kwezikaNtshebe).
Wenza kanje uMashaba kanti vele “obasi” bakhe sekunesikhathi bemcuphile, befuna isizathu sokumgabha. Ngenkathi eqashwa, wabekelwa imigomo emibili: ukufaka iqembu kwi-Africa Cup of Nations 2017 nakwiWorld Cup 2018.
Ukuhluleka wukufaka iqembu kwi-Afcon kumbangele amazinyo abushelelezi kwiSafa nakubalandeli. Kwenzeka konke lokhu uxabana nabadlali kangangokuthi uKermit Erasmus noKamohelo Mokotjo batshela izwe ukuthi bayazidingisa eqenjini uma kusekhona uMashaba.
Ukushiya kukaMashaba – kungabe uyaxoshwa noma uyazishiyela – ngeke kube yinto enhle. Lokhu ngikusho ngoba inkinga enkulu yeBafana, akusiye umqeqeshi uMashaba kodwa yizikhulu zeSafa uqobo.